Indlela yokudweba isimboli seMatshi esisiseko: Imilinganiselo yeBhunga
Iimpawu zeM Manga - Iipropati zomzimba zeMpawu zeMpawu
Ubungakanani bomzimba ngomlinganiso oqhelekileyo. P. Stone, ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Olu qeqesho luyakubonisa indlela yokwenza uphinde uchaze isicatshulwa esingundoqo se- manga . Ukusebenzisa isibalo sefowuni, unako ukufumana iindawo eziphambili ze-pose zichanekile kwaye zilinganiselwe ngaphambi kokuba ungeze iinkcukacha. Ukuba unqwenela ukudweba udidi olungaphezulu, jonga iikhompyutha ezibonisa indlela yokudweba i-manga ninja kunye ne- manga yama-cyborg .
Xa udweba umlingisi we-manga, ukulingana okufanelekileyo kubalulekile. Unamalunga angama-7.5 aphakamileyo. Amaqhawe omdlalo we-Manga athambeke ukuba abe nobukhulu obuninzi, ubuncinane ubuncinane beentloko ezili-8, zihlala zide. Intloko encinci inokuphakamisa impembelelo emangalisayo yombono ophantsi kwisigxina seqhawe. Ukubukeka okwehluke kakhulu kwisitayela esikhulu somxholo wekhathuni.
Ngaphandle koko, ubukhulu bomzimba buyinto ephezulu kakhulu: ihlombe lakho kumgca wakho lilingana ubude obufana nekhosi yakho kwisandla sakho. Okufanayo kuya kwenyuka emadolweni nasemadolweni. Ngokuqhelekileyo ndiyathanda ukuqala ifreyimu yefowuni ngokubeka (ungagqiba) intloko, uze ungene kuyo yonke enye ifayile, ngenxa yokuba intloko ihlala ikhokela umzimba. Iinkcukacha ziphuhliswa kunye nalo lonke uhlobo, aluqedanga kuqala.
Ukusebenzisa i-Wireframe eSebenzayo yokwakha i-Character ye-Manga
Isiseko sefayile yocingo elula yomzobo wesimboli. P. Stone, ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Siza kuqala ukudweba umgca usebenzisa i-wireframe elula. Kulo mzekelo, siza kusetyenziswa isiseko esisisiseko sokuma ukuze ubone indlela esebenza ngayo.
Kopisha umntu womnxeba, ukongeza izangqa kunye nezivalo (njengoko kuboniswe kumfanekiso ngakwesobunxele) phakathi kwamalungu apho izidumbu kufuneka zihambe khona. Yenze ibe yincinci kwisilathisi esinomzimba onjengoko, okanye umlenze wokwakha i-bulkier. Gcina ukhumbule ukuba usafuna ukwenza zonke iintlobo zokwakha ukwenzela ukuphucula isitayela sobugcisa, kwaye abalinganiswa be-anime abavumi ukuba njengama-muscular njengabalingisi bee-cartoon zasentshona. I-forearm kunye neengxube zethole aziqhubekiyo zonke iindlela eziya kwinqanaba kunye neengqungquthela kuba izitho zincinci kulawo malungu.
Ukudweba Inkcazo yomntu we-Manga
Ukudweba Inkcazo. P. Stone, ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Okulandelayo udwebe umgca wecala-i-curvy, iimizila eziqhubekayo ezichaza umlingiswa. Ijika elihamba phambili le miqolo ibaluleke kakhulu. Amakhonkco okugqithiseleyo kumfanekiso udla ukujonga umatshini kunezinto eziphilayo, kwaye ke jonga kakubi.
Inkcazo elula ekulungele ukuguqulwa ibe ngumlingiswa. P. Stone, ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Njengoko uyakubona, umfanekiso odibeneyo apha ungowesilisa. Ngaphandle kokusasa, amabhinqa aya kuba neenyawo ezibanzi kunye namanqatha amancinci, anike "i-hourglass". Isitayela se-Manga sichaza ukuba amahlombe abo aphantsi kakhulu kunamadoda, kunye neentamo zazo zincinci. Amaxesha amaninzi ama-artists athabatha abafazi kwisimo esinjalo sokuthi iinyawo zabo ziyakuthintela ukuqhubela phambili ukuphucula isimo se-hourglass.
Emva koko qhubeka kwaye usule izikhokelo ngaphakathi kwenkcazo. Yenza naziphi na izilungiso kwizinto ezingakhangeli kakuhle. Ngoku unomfanekiso osisiseko ulungele ukongeza iinkcukacha.
Iimpawu zobuntu nge-Wireframe
Umgca weSketching ubeka kwifayile yefayile. P. Stone, ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Indlela yokwenza ucingo nebhola yinto eqhelekileyo yokudweba amanani kwaye yindawo efanelekileyo ukuqala. Xa unesiqiniseko, uya kufumana ukuba uya kusebenzisa nje isiphakamiso sesakhelo, ngamanye amaxesha uyaphonononga ngqo kwinqanaba. Lo ngumlingiswa olula ukuqala ngawo. Indlela yecenfam iluncedo ekusebenzeni ngokukhawuleza, kwakhona.
Zama ukukhankanya ezinye iimpawu zomntu usebenzisa indlela ye-wireframe. Qaphela ukuba unokuyikopisha kwiifoto zabagijimi kunye nemiboniso yezobuhlanga, okanye usebenzise i-manikin yomculi weenkuni ukuseka i-pose.
Imilinganiselo yoMzobo Wabantu
Ukutshisa Umlilo Neentlambo
Ukuya kwiKlasi yokuDrafa yeSithombe
Uhlalutyo lwe "Window Open" nguSaki
Ukusetyenziswa kweScion xB kunye neTC iya kuba yiNtengiso enkulu
Indlela yokulungisa i-Sunbrella
Indlela yokwenza i-Metamucil Flubber
Amalungelo okuGundla Ngaphantsi koMongameli uRonald Reagan
Imfazwe Yeminyaka Emakhulu: Imfazwe yaseAgincourt
Yiyiphi Intambo? Yintoni ephumayo? - Umphathi weBeattle Layout
Gcina ii-Gloke zakho zeGlove zisuke ziba nzima
Iintlobo ezahlukileyo zokukhwela i-Ice